QODOBBADA WAXTARKA LEH EE BOQOSHAADA CAD - DAAWADA DADWEYNAHA
Qodobada suugaanta ee boqoshaada cad
Ceps ayaa laga yaabaa in laga yaabo inay ugu badan tahay suugaanta loogu talagalay dadka wax soo saarka leh. Waxaa si sax ah loogu yeeri karaa boqorka boqoshaada, maxaa yeelay waxa lagu gartaa oo kaliya muuqaalkiisa muuqaalkiisa, laakiin sidoo kale sifooyinkiisa dhadhankiisu aad u sarreeya, taas oo ka dhigaysa wax ku habboon oo ah cuntooyin badan. Waxaa intaa dheer, fungus cad ayaa lagu gartaa tiro ka mid ah guryaha waxtarka leh, kuwaas oo lagu kala hadli doono hoos.
Boletus ama boqoshaada porcini, sharaxaad
Moolka cad iska leh noocyada la cuni karo ee boqoshaada ka tirsan caleenta Borovik. Xuduudaheeda dibadda waxaa inta badan saameyn ku leh xaaladaha sii kordhaya, laakiin xitaa kiiskii ugu xumaa, marwalba waa mid aad u qurux badan, gaar ahaan ka soo horjeeda qaraabada kale. Mushaharadaan tubaakada ah waxay leeyihiin lugta cadcad ee caan ah, taas oo gaari karta 10 cm dhexroor iyo inta badan waxay koraan ilaa 12-25 cm oo dherer ah.
Dusha sare ee salka (lugaha) ayaa gabi ahaanba lagu daboolay qaabka mesh ee hooska iftiinka ah, halka daboolka furka (dhererkeedu waa inta badan 30 cm) waxaa markii hore lagu gartaa midab jaale ah oo cagaar ah, wax yar kadibna wuxuu noqdaa midab madow. Qaybta kore ee daboolka waa siman, iyo kan hoose wuxuu dareemayaa sida isbuunyo leh dalool yar.
Cuntada fangas cad waxay ku filan tahay cufan, haddii la gooyo ama jabo, qaybta gudaha ee jabka ayaa weli caddaan ah. Mushinka jaban wuxuu yeelan doonaa ur aan fiicnayn.
Waa muhiim! Boletus wuxuu leeyahay "walaalo walaal" oo xun, oo la yiraahdo likaha cawska. Waxyaabaha ay isku midka yihiin waxay ku sharaxayaan dabeecada qoyska mid ka mid ah Boletovs. Galleyda fungus uma badna in uu sumoobo culus, laakiin dhadhanka suxuunta la kariyey ayaa hubaal ah in la baabi'in doono, maadaama ay aad u qadhaadh tahay.
Marka la ururiyo boqoshaada caddaanka ah, waxaa kale oo muhiim ah in la awoodo in ay kala soocaan da'da yar ee nuqulka dhalinyarada. Ugu horreyntii, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa kabaha iyo lugaha ee boqoshaada la helay. Gaariga yar yar, lugta ayaa ku bararsanaysa saldhigga, halka ay jirtana waa mid dheer iyo mid yar oo wareegsan, oo leh qaybta sare ee cagaaran ama guduudan.
Sida loogu talagalay, boqoshaada dhallinyarada qaybta hoose waa in ay caddaan midab leh, iyo in boqoshaada jir ah waa inay noqdaan huruud ah-cagaaran. Si kastaba ha ahaatee, waa in aynaan illoobin in hooska lugaha, sida midabka of cap ee boqosha boletus, inta badan ku xiran tahay meesha koritaanka ay.
Tusaale ahaan, keynta geed, daboolka fangaska caddaanku waa bilowga hore, laakiin da'da waxay noqotaa casaan caan ah, taas oo aan lagu sheegin sharaxaadda. Isla mar ahaantaana, beeritaanka bjørkuu wuxuu ka dhigaa midab khafiif ah, iyo geedo geedis ah waxay ku siisaa midab madow, oo badanaa la taabto. By habka, boletus koray geedkii oak, waxaa si xaq ah loo tixgeliyaa ugu karisey iyo dhadhan fiican leh.
Xaggee bay boqoshaada cadaan u koraan iyo goorta la soo qaado
Dadka soo jiidashada leh ee macquulka ah waxay ogaanayaan halka ay tahay in ay raadiyaan jeebka, laakiin haddii aad ku cusub tahay ganacsigan, marka hore, waa inaad fahantaa in boqollada boletus ay ku nool yihiin qoysaska kaynta. Taasi waa sida ugu dhakhsaha badan ee aad u aragto mid ka mid ah wakiilada noocyada, bilaabi raadinta qaraabadiisa ku xigta isaga.
Waxaa ka mid ah sifooyinka kale ee fungus cad, mid ka mid ma dhicin inuu soo jiito dareenkiisa for nacasyo ah qaro weyn oo mugdi ah. Sidaa darteed, inta badan kiisaska borovikov ku dhuuban cawska ku yaal duleedka kaynta, geesaha ama caleemaha yar yar ee geedaha.
Isla mar ahaantaana, kala soocista kaynta kobcinta miraha cad, waa inaad si taxadar leh u eegtaa kaymaha qaangaarka ah ama xitaa da 'old old moss and lichen, inkasta oo boqoshaada ay dareemaan ugu yaraan raaxo, carrada loamy ee loamy iyo carrada loamy.
Ma taqaanaa? Borovik waxay ku baahsan yihiin dhammaan qaaradaha, meesha kaliya ee ayan korin waa dhulalka Australia.
Intaa waxaa dheer in la go'aamiyo qiyaasta qiyaasta boqolleyda lagu sharaxay, waxaa haboon in la ogaado marka fawaakihu cadaanayo, sababtoo ah bilaha qaarkood waa wax aan macquul ahayn in la raadiyo. Sidaas darteed, ku dhowaad dhammaan boroviki u muuqdaan kaymaha horaantii July iyo waxay dhici kartaa ilaa dhexe ee dayrta.
Xilliga dayrta, marka dhaxanta ugu horreysa ee u muuqata, oo ka hooseysa qoraxda qorraxda qorraxdu waxay heli kartaa "boqoshaada" cagaaran caddaan ah oo la daboolay jilayaal badan oo baraf ah. Haddii fangaska uu ku jiro xaalad sidan ah muddo gaaban, ka dibna waa mid ku habboon isticmaalka, inkastoo baaritaanka cayayaanka badanaa laga helayo (sababtoo ah heerka biyaha sare iyo sii-deyn-celinta, waxay si deg-deg ah uga sii darayaan).
Waa muhiim in la ogaado, iyo inta ay le'eg tahay fungus cad, sida wakiillada da'da yari ay leeyihiin sifooyinka sare ee dhadhanka. Sidaa darteed, xilliga xagaaga dhererkoodu wuxuu gaaraa qaangaadhka 5-9 maalmood, bisha Oktoobarna waxaa loo kordhin doonaa 9-15.
Halabuurka ee boqoshaada cad: Kalooriga, qiimaha nafaqada, fiitamiinada iyo macdanta
Waxaa laga yaabaa in aad ogtahay halka fawaakihu cadaanayo, laakiin ma aha dhammaan dadka wax soo goynaya inay la socodsiiyaan maaddooyinka waxtarka leh ee sameeya. Xaqiiqdii, boletus - kaliya dukaanka of fiitamiin iyo macdanta faa'iido leh.
Qalalan qallalan waxaa ku jira 45% protein, 50% carbohydrates iyo 3.4% dufanka. Intaa waxaa dheer, halkii 100 g oo boqokooyinkan ah ayaa lagu qiyaasey 89.4 g oo biyo ah, 2.3 g oo fiyuus ah, 0.9% ash.
Waxaa ka mid ah faa'iido leh ee fitamiinada (sidoo kale 100 g) waxaa lagama maarmaan ah in la go'doomiyo B1 (0.04 mg), B2 (0.3 mg), B3 (ama PP - 5 mg), C (30 mg), E (0.63mg). Kooxda macruufiyeyaasha ee kiiskan waxaa ka mid ah potassium (470 mg), magnesium (15 mg), fosfooraska (90 mg), sodium (6 mg) iyo kalsiyum (25 mg).
Waxyaalaha raad raac (5.2 mg), manganese (0.23mg), zinc (0.33mg), fluorine (60 μg) iyo cobalt (6 μg). Sidoo kale dadka kalluumeysatada ah waa polysaccharides, sulfur, lecithin ester iyo waxyaabo badan oo ah β-glucan.
Guud ahaan, halkii 100 g oo ah boqoshaada cad, celcelis ahaan 30 calories, waxayna leeyihiin waxyaabo badan oo faa'iido leh.
Qodobbada waxtarka leh ee boqoshaada cad
Ma aha wax la yaab leh in sida badan oo fiitamiin ah iyo macno nafaqo faa'iido leh ay ka dhigaan mushaharka cad ee martida soo dhaweynaya ee dambiile kasta oo mushahar ah, gaar ahaan marka la tixgelinayo in dhif ah qaar ka mid ah qaraabadiisa (maaha wax hadhuudh ah ama midab kala duwan) ay ku faani karaan sifooyinka noocan ah.
Haddii aan tixgelineyno fungus caddaan ah marka laga eego aragtida hantideeda faa'iido leh, markaa, ugu horreyntii, waxaa habboon in la sheego dhiirigelinta hababka dheef-shiidka jirka iyo dareenka dalxiiska ee ay bixiso. Sababtoo ah qiyaasta badan ee borotiinka, badeecadani waxay inta badan u dhigantaa hilibka, taas oo ah, sida likaha, waxaa la dhajiyaa muddo dheer.
Intaa waxaa dheer, baaruud iyo polysaccharides oo qayb ka mid ah borovikov ayaa ku habboon doorka kaaliyayaasha ee dagaalka ka dhanka ah kansarka. Sidoo kale ma jirto qarsoodi ah in nambarku uu leeyahay bogsiin boogta ah, saameynta anti-infekshan iyo tayada.
Lecithin ether, oo ku jirta boronic kasta, waxay ka hortagtaa dhigista kolestaroolka ku jirta maraakiibta, taas oo ka dhigeysa mid aad u faa'iido leh dhiig-yaraan iyo atherosclerosis. Ergothionein wuxuu kor u qaadaa cusbooneysiinta unugyada, taasoo ka dhigaysa boqoshaada badan (gaar ahaan fungus cad) aad u faa'iido leh kelyaha, beerka, indhaha iyo dhuuxa lafta lafta.
Ha ilaawin sifooyinka faa'iido leh ee β-glucan - carbohydrate, oo u dhaqma sida antioxidant xoog leh, taas oo saameyn xoog leh ku leh habka difaaca jirka. Waxay ka ilaalisaa jidhka bini'aadamka fayrusyada, kansarka, bakteeriyada iyo fungi.
Sida fitamiinada oo kaabaya qiyaasta borovik, tusaale ahaan, B2 wuxuu si toos ah ugu lug yeeshay falcelinta redox iyo wuxuu ka qaybqaataa midabtakoorka midabtakoorka oo leh falanqeeye muuqaal ah. Qadar aan ku filnayn jirka ayaa sababi karta xad-gudub ku dhaca xaaladda maqaarka, xuubka xuubka, iyo sidoo kale aragti iftiin iyo iftiin.
Faytamiin C wuxuu si toos ah ugu lug leeyahay habka difaaca jirka wuxuuna kor u qaadayaa nuugista birta. Jiritaan la'aanta qaybtan waxay keeneysaa dabacsanaan iyo dhiig-baxa cirridka, wuxuuna sidoo kale keeni karaa dhiig-baxa sanka (oo ah natiijo ka yimaada suurtagalnimada iyo jilicsanaanta dhiigga dhiigga).
Waa muhiim! Inkasta oo boqoshaada caddaanku ay yihiin il wanaagsan oo borotiinka ah, chitin oo ku jirta boqoshaada cusub si aad ah u adkeynaya geeddi-socodka xalka. Taasi waa sababta loogu taliyey in la isticmaalo boqoshaada horay loo qalajiyey, sababtoo ah kiiskan, nuugista borotiinku wuxuu gaaraa 80%.
Isticmaalka boqoshaada caddaan ee daawada
Maqalka boqoshaada caddaan iyo sharraxaad kooban ayaa laga heli karaa sannadihii la soo dhaafay. Sidaa darteed, Ruushka, qarnigii 17aad, hilibka boletus waxaa loo isticmaalay daaweyn dibedda ah ee qabow, iyo Jarmalku wuxuu wax ku ool ahaa daaweynta kansarka maqaarka.
Maanta, ma aha oo kaliya dhakhaatiirta, laakiin sidoo kale dadka caadiga ah ee jecel "ugaadhsashada musqusha" waxay leeyihiin fikrad ah astaamaha daawooyinka ee fungus cad, oo ay ka mid yihiin saameynta anti-bararka iyo anti-sclerotic, saameynta antimicrobial, guryaha antitumor iyo xanuunka xanuunka ee pectoris.
Boroviki waxaa loo isticmaalaa qaab kasta oo loogu talagalay cudurada wadnaha ee ischemic, cudurrada xididdada (thrombosis iyo thrombophlebitis), iyo sidoo kale kordhinta xoogga difaaca iyo jimicsiga guud kadib jirro infekshin hore, sunta ama dhaawacyada. Sidoo kale, isticmaalka boqoshaada caddaan ayaa lagu tilmaamaa kahortaga kansarka iyo ka hortagga dib u soo noqoshada suurtagalka ah ka dib daaweynta xagjirnimada.
Maanta, waxaa jira tiro ka mid ah cuntada sida daawooyinka ah, qaybta ugu muhiimsan ee taas oo ah mushahar, oo caan ah loo yaqaanno caddaan. Waxaa loo isticmaalaa in la sameeyo maraq, kalluun ama kaliya in la cuno, ka dib markii ay diyaarisay suxuunta delicious, inkastoo ay ugu fiican tahay in la kariyo tinctures ka boletus ah.
Waa muhiim! Inta lagu jiro daaweynta kulaylka, walxaha bayoolojiga firfircoon ee ku jira qashirku waxay bilaabaan inay burburaan, taas oo macnaheedu yahay inaad awood u leedahay inaad ilaaliso sifooyinka bogsashada ee badeecada oo kaliya iyadoo la yareeyo wakhtiga dillaaca ama karkarinta.
Waa kuwan tusaalooyin ka mid ah cuntada ugu caansan adigoo isticmaalaya boletus.
Marka hore, fangaska cad waa in loo tixgeliyaa inuu yahay caawiye wanaagsan oo wadnaha ah, maadaama uu ka kooban yahay alkalot hercineine, oo loo isticmaalo baaritaanka angina, wadnaha wadnaha iyo fibrillada atrial.
Si aad u hesho qalab bogsasho leh, waad karin kartaa waxyaabahan soo socda faleebo: 2 tbsp. malqacadaha boqoshaada la qalajiyey waa in lagu shubaa galaas oo vodka ah oo ku adkaysana meel mug leh illaa hal asbuuc. Halabuurka ka soo baxa qaado 1 qaado oo 2-3 jeer maalintii ilaa soo kabashada.
Si sahlan loo isticmaalo, waxaad ku milicsan kartaa faleebo faafin leh biyaha, laakiin kaliya ka hor isticmaalka. Qalab isku mid ah ayaa u fiican daaweynta xanuunka wadajir ah. Waxaad u baahan tahay oo keliya in aad sameysid cadaadis isla markaana ku darso maro diiran.
Bedel ahaan tinctures saxarka jarjaran ee la jarjarey waxaa la geliyaa weel quraarad ah, ku shubay vodka oo lagu kaydiyaa meel mugdi ah mudo laba toddobaad ah.
Taas ka dib, faleebo waa la sifeeyaa oo la cadaadiyaa, qaadashada sida tonic ah nus saac cuntada ka hor laba jeer maalintii (shaaha oo tincture ah waa ka wanaagsan in lagu qasi karo raso ah biyo la karkariyey). Koorsada daaweynta kiiskan waa 10 maalmood, laakiin haddii ay lagama maarmaan noqoto, waxaad ku celin kartaa fasax todobaad kadib.
Inta lagu jiro daaweynta cudurada qaaxada, suntan waxaa loo qaadaa shaaha 15 daqiiqo qadada ka hor iyo qaado qiyaas ahaan rubuc ka mid ah saacad kahor cunteynta fiidka. Muddada daaweynta waa 1 bilood, iyo, sida kiiskii hore, waa la soo celin karaa ka dib nasasho todobaad ah.
Marka la daaweynayo pectoris angina, waxaa lagula talinayaa in la cuno hal qaado oo ka mid ah qashinka cawska ah ee fangas cad cad 30 daqiiqo ka hor cuntooyinka saddex jeer maalintii, sii wadidda koorsada 2 asbuuc.
Waxaa jira cuntooyin kale oo caafimaad oo gaar ah leh boletus. Tusaale ahaan si loo xoojiyo oo loo soo celiyo timaha boqoshaada la qalajiyey (1 qaado oo yar) waxaa la dhex mari karaa Booqday Furimaha Dagaalka hilibka iyo saliidda khudradda ka mid ah (oo ka fiican tufaaxa ama burdock) waxaa lagu daraa iyaga, ka dibna geela soo go'ay ayaa lagu daboolay timaha isla markaana si taxadar leh u xoqay xididdada.
15 daqiiqo ka dib, waxaad ku dhaqi kartaa halbeegga biyaha kulul. Nidaamkan waxaa lagu soo celiyaa inta lagu jiro bisha oo marmar ah 2 jeer toddobaadkii.
Ma taqaanaa? Mushinka cad ayaa iska leh qaybta koowaad ee cuntada qalalan, taas oo macnaheedu yahay inaad cuni kartid iyada oo aan wax hannaan hordhac ah lahayn.
Waxyaabaha halista ah ee boqoshaada caddaanka ah iyo ka horjeeda
In la ogaado waxa xajmiga cad iyo waaxaha faa'iidooyinka leh ee ay leedahay, waa lagama maarmaan in la xuso khilaafka suurtogalka ah ee isticmaalka. Ma qarsoodi in qiyaastii oo dhan oo dhan, oo ay ku jiraan whit, ay yihiin maqaayad dabiici ah oo xooggan oo soo saara qadar badan oo ah walxaha sunta ah (tusaale ahaan, rigoore shimbireed, cadmium, macdanta, meerkuriga iyo strontium).
Sababtan awgeed, laguma talin in la soo ururiyo boqoshaada meelo badan oo ka mid ah waddooyinka mashquulka ah iyo goobaha warshadaha, sababtoo ah halkii ay fiicnaan lahayd, waxay waxyeelleynayaan caafimaadkaaga.
Intaa waxaa dheer, waa inaadan siinin boqoshaada, sababtoo ah ilaa 12-14 sano nidaamka dheef-shiid kiimikaadka yar ma awoodi karo inuu xajisto xajinta qotodheer ee fungus, sababtoo ah waxa ka maqan xaddiga lagama maarmaanka ah ee enzymes loo baahan yahay.
Xaaladaha qaarkood, dulqaad shakhsi ah ee alaabtan ayaa dhici karta, laakiin waxaad ku baran doontaa tan oo kaliya khibraddaada ama adoo gudbinaya imtixaanada ku haboon dadka badankood dayacaad.
Dhammaan waa in ay u hoggaansamaan qiyaasta. Sidaa daraadeed, xitaa markaad ogtahay fangaska cad ee "wajiga", adigoo haysta fariin sida ay u koreyso iyo meesha laga helo glucose-ga, waa inaadan isla markiiba ku boodin iyaga. Xasuusnow, waxaa jira dad badan oo waxyeello u leh dabeecadda, sidaa daraadeed, waa lagama maarmaan in loola tacaalo musqulaha.